Haezer Farshaxanimada Album Album - Joornaalka Naqshadeynta
Farshaxanimada Album Album
Farshaxanimada Album Album Haezer wuxuu caan ku yahay dhawaqyadiisa adag ee bajaajyada, biririfyo astaamo leh oo leh saameyn wanaagsan oo la hagaajiyay. Waa nooc cod ah oo ka soo baxa sida muusigga tooska ah ee muusikada qoob-ka-ciyaarka ah, laakiin kormeerid dhow ama dhageys ah waxaad bilaabi doontaa inaad ogaato dhowr lakab oo dhowr jeer oo isdaba-joog ah oo ku jira sheyga dhammaaday. Ujeeddada hal-abuurka iyo fulinta ayaa culeysku ahaa in la barbardhigo waayo-aragnimada maqalka ee loo yaqaan Haezer. Qaabka farshaxanimada farshaxanku maahan haba yaraatee nooca muusikada qoob-ka-ciyaarka, sidaa darteed wuxuu ka dhigaa Haezer nooc hiddahiisa ah.
Magaca mashruuca : Haezer , Magaca naqshadeeyayaasha : Chris Slabber, Magaca macmiilka : CS Design & Illustration.
Farshaxanimada Album Album Chris Slabber Haezer